Unokundinceda ukuba ndilawulwe i-Amazon ngophando oluphezulu lokuthengisa kunye nokukhethwa kwegama elingundoqo?
Ngelishwa, akukho mkhombandlela onokuzifumana, okanye naziphi na izicwangciso ezinokugqibela zokuba nempumelelo yexesha elide kunye nezihlomelo zakho zemveliso eziboniswe kwi-Amazon ukukhangela njengento yokuthengisa ephezulu. Into ekhoyo kukuba kukho amaninzi amaninzi ahlukeneyo kwimpumelelo ye-ecommerce ngaphaya koko, umzekelo, njengoluhlu nolungiso lwexabiso, ukuthunyelwa kunye nokuphathwa kwengxelo. Ukungakhankanyi, ukukhangisa, irhafu, kunye nezinye izinto eziqhelekileyo zisebenza ngamandla okanye mhlawumbi izinto ezichitha ixesha.
Kuphi ukufumana ingqwalasela eyiyo?
Ngoko, masijongane nayo - awukwazi ukuyilawula yedwa. Enyanisweni, konke okuphathelele kwimveliso efikelela kwizikhundla eziphezulu kwiindawo ze-Amazon ukukhangela zonke abathengisi abanomgomo oyintloko ngaphaya kwalo. Kodwa indlela yokufumana inzuzo yokukhuphisana kwaye iholele phambili kuloo ndawo yemakethi e-intanethi egcwele indawo? Ngenhlanhla, kukho izixhobo ezininzi ezincedo kunye neeplani ezisekhompyutheni ezifumaneka kwiindawo ezivulelekileyo, okanye ngee-akhawunti ezihlawulwe ngokukhawuleza kunye nokubhaliselwa kwexesha elide. Nangona kunjalo, kukho iintlobo ezininzi zeendlela ezikhethiweyo ezinxulumene nalo mbandela. Kwaye kuguqula umsebenzi ukuba ukhethe isisombululo esifanelekileyo kwisimo esinzima. Kwaye ngoku nangoko ndiza kukubonisa ezinye zezinto eziphezulu ezibonakalayo kunye nabancedisi abanokuthenjelwa bexesha elide ndilisebenzele ngempumelelo yam intando e-Amazon njengomthengisi ophezulu ngokuqhubekayo enyathelo elilodwa phambi kwamagosa amantshontsho amfutshane. Ngoko, ngaphantsi ndiza kukubonisa izixhobo ezintle ezifanelekileyo kunye namacebiso aluncedo ukwenza izinto zibe lula, ubuncinane xa kuziwa ekuthengiseni i-Amazon njengepro.
Amagama angundoqo angabakho amandla oMncintiswano
Wonke umsebenzi onokuwina wokuthengisa kwi-Amazon uqala ngohlu olulungiselelweyo lwemveliso. Enyanisweni, yinto yokuqala kunye eyona nto ibaluleke kakhulu ukuba yenziwe xa ufuna ukunyuka ukuya phezulu kwi-Amazon ukukhangela njengomthengisi ohamba phambili kwi-niche yakho okanye kwisiqhamo somkhiqizo. Kwaye konke ukucwangciswa kolwazi (kufana nomxholo wokuqala we-SEO) kuqala ngomxholo wokubaluleka kunye nophando olungundoqo lwegama elingundoqo. Ngokufanelekileyo, kufuneka uxhaswe ngongoma okhuphiswano oluxabisekileyo ngexesha elifanayo. Ngoko, ngaphambi kokuba nantoni na enye, ndincoma ukuba sizame ukusetyenziswa kweThuluzi leNgcaciso leNgcaciso leNgcaciso ngeGoogle. Esi sixhobo sinokukunceda ukuba uqale ukuqonda ngokubanzi malunga nawaphi amagama abalulekileyo kunye namagama e-link-tail omele uwathathele isihloko sakho sokubhala kunye nenkcazelo yomkhiqizo.
Ukunyuka kwi-Amazon Khangela kwaye ube ngumthengisi ophezulu
Kwaye apha ekugqibeleni siya kufika kwindawo. Ndiyathetha xa unomfanekiso omkhulu wegama lakho elikhethiweyo ngamagama akwii-key ngeempumelelo ezifanelekileyo ezifanelekileyo, lixesha lokuba ukhangele ezinye zezinto eziphambili ezifunyenwe ngabadlali bakho abaphumeleleyo - kwaye usebenzise ingqiqo yokukhuphisana. Ukufumanisa amathuba okwenza amagama angundoqo aphezulu, ndincoma ukhethe enye yezi zixhobo ezibini zokubulala - cinga ukunikezelwa ngeMerchantKeywords, okanye i-KeywordInspector - ndazifumana zikunceda kakhulu ukubeka uluhlu olulungiselelayo oluvelisa ukuthengisa. Yaye makhe ndithethe kwakhona kwakhona-yinto nje ekhethekileyo. Okubalulekileyo kuba ngamaziko abo asetyenziswa ngamazwe ngamazwe angakwazi ukukunika ngokukhawuleza ukukhethwa kwamagama akwiindawo eziphambili kunye nezinto ezikhethiweyo ezisetyenziswa ngabathengi abaphilayo abathenga iimveliso kwi-Amazon. Ngexesha elifanayo, i-MerchantKeywords kunye ne-KeywordInspector inokukunika amandla ngengqiqo yegama elingundoqo kunye neziphakamiso ezisebenzayo-zithathwe kwaye zithathwa ngokuthe ngqo ukusuka kwiivenkile ezikufutshane zeemarike. Yiyo leyo! Yenza ingqiqo yolwazi yenza konke ukuphakamisa okunzima - kwaye uyenziwe.